Technologies က - ရှန်ကျန်း Feellife ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Inc မှ
FEELLiFE ၏အသက်ဝိညာဉ်: လူ့သတ္တဝါသည်အညွှန်းများကိုအဆိုပါ 3rd Way ကိုပေး
1. အဆိုပါSurge®ကြိမ်နှုန်းကူးပြောင်းခြင်း Nebulization နည်းပညာ
ထောက်လှမ်းရေးအကြိမ်ရေအသက်ရှူခြင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကိုလေပေါ်မှာပ။ အဆိုပါမှုန်ရေမွှားမှုနှုန်းနှင့်ငွေပမာဏကိုနက်နဲအဆုတ်ထဲမှာအရည်၏အစစ်ခံနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်, လူနာရဲ့အသက်ရှူကြိမ်နှုန်းနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းအကြိမ်ရေပြောင်းလဲခြင်း nebulization ဟောင်း nebulization mode ကိုသုံးကြိမ်ညီမျှ။
လာသောအခါအာဏာအပေါ်အလိုအလြောကျ nebulizer အပိုင်းအစရှင်းလင်းရန်နိုင်သည့်ကိရိယာနှင့်အတူ။ အဆိုပါ nebulizer အပေါ်လှည့်သည့်အခါအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး mode ကိုတံခါးအထဲသို့ဝင်ခြင်း, အစအဦးကို5စက္ကန့်မှာ သာ. ကြီးမြတ်သက်ရောက်မှုအင်အားစုနှင့်အတူကျန်နေတဲ့မူးယစ်ဆေးထုတ်ရန်မှပါဝါတက် crank, မူးယစ်ဆေးပိတ်ဆို့ခြင်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းလျှော့ချဖို့ပါလိမ့်မယ်။
3. အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေး induction ပြီးတော့အပူပိုင်း Burning ကာကွယ်တားဆီးရေးနည်းပညာ
အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်သော induction: တစ်ဦး NTC သော induction nebulizer ။ Nebulizer ဆေးဖလား၌ဖြေရှင်းချက်၏အပူချိန်ကို detect နိုင်ပါတယ်အပူချိန်အရည်၏လှုပ်ရှားမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကအား, 45 ℃ရောက်ရှိသောအခါအလိုအလျောက်အပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သော NTC thermistor ရှိပါတယ်။
အပူပိုင်းမီးလောင်ရာကာကွယ်တားဆီးရေးနည်းပညာ: အရည်သိုလှောင်ရုံအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကုန်လျှင်ခံစားဖို့အပူခါးဆစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ nebulizer ကိုပိတျထား-Down ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရည်သိုလှောင်ရုံအတွက်ဖြေရှင်းချက်အာရုံခံလာသောအခါခြောက်သွေ့သောမီးလောင်ရာဖျက်ဆီးခံနေရထံမှ nebulizer အပိုင်းအစကာကွယ်ပေးရန်, ထွက်ပြေးနေသည်။
4. လီသီယမ် Titanic ဘက်ထရီ Powered System ကို
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံ, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထား function ကိုနှင့်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတာဝန်ခံနှင့်ဥတု 3000 သံသရာကိုရောက်ရှိနိုင်သည်, ဝန်ဆောင်မှုဘဝ5နှစ်အထိဖြစ်ပါတယ်။
5. Mesh® Nebulizer Piece ပစ္စည်းပြီးတော့လေဆာထူးခြှနျလာကြတယ်နည်းပညာ
တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း nebulizer အပိုင်းအစကောင်းသော biocompatibility အတူချေးကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ, nebulization ပိုလုံခြုံစေတယ်။
အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်တန်းဖောက် 2.5um မှာအပေါက်အချင်းစောင့်ရှောက် ± နက်နဲအဆုတ်ထဲမှာအရည်၏အစစ်ခံမှုနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့, အမှုန်ရေမွှားမှုန်ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစေသည်, 25%, မူးယစ်ဆေးစုပ်ယူမှုနှင့်ထိရောက်မှုပိုကောင်းဖြစ်လာစေသည်။